Zidane oo ka hadlay wararka xanta ah ee la xiriirinaya Neymar Jr kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 12 Agoosto 2019. Tababaraha kooxdda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay inuusan meesha ka saari doonin fikrada ay kula soo saxiixan karaan Neymar Jr inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Real Madrid ayaa haatan ah kooxda inta badan ugu cad cad inay ku guuleysato adeega 27 jirkan reer Brazil, inkastoo rabitaanka laacibka ee markii hore ay si cad ugu muuqatay inuu doonayo dib ugu laabashada kooxda Barcelona.
Hadaba Zinedine Zidane ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports” kaddib markii wax laga weydiiyay suurtogalnimada ay Real Madrid ku sameyn karto saxiixa Neymar Jr wuxuuna ku jawaabay:
“Neymar ma ahan xiddig ka tirsan kooxdeena, laakiin ilaa iyo 2-da Sebtember, wax walba ayaa dhici kara”.
“Waxaan halkaan la joognaa kooxda aan heli karno, mana ka fikireyno wax kale”.
“Gareth Bale iyo James Rodriguez waa ciyaartoy Real Madrid ah, laakiin wax walba ayaa dhici kara maalmaha soo socda ilaa dhamaadka suuqa kala iibsiga”.
“James Rodriguez waa ciyaariyahan Real Madrid ah, welina lama soo wicin, laakiin waxbaa iska bedeli kara waqtiyada soo socda”.
Mbappé oo falaqeeyay xaalada Neymar Jr ee kooxda PSG